N'abalị a, m hapụrụ ike m maka laptọọpụ m na-arụ ọrụ. Enwere m ikike abụọ (ihe ọzọ dị mma ime… na-azụta ihe mgbe niile!) Ma otu n'ime ha mechara gaa fritz.
Zuru oke ikpe ikpe asọmpi PHP ruru ụnyaahụ.
Gaa n'ihu na-eme ụfọdụ n'ime m WordPress plugins.
Nọgide na-eme ụfọdụ Ndenye Blog.
Ma n'ebe ahụ ị nwere ya… ugbu a, m nwere 2 awa ewepụghị ekpe mgbe m dere a post! Ya mere, isi bụ: Hapụ ike gị na-arụ ọrụ! N’ezie ọ ga-amachi oge gị iji rụchaa ọrụ gị n’ụlọ.
Ntinye aka na Blog: RobNeville.net